Ajụjụ: Otu esi eme ka mmiri kpoo ọkụ n'ime ọdọ mmiri - BikeHike
Mbido » iche » Ajụjụ: Otu esi eme ka mmiri kpoo ọkụ n'ime ọdọ mmiri
Ihe na December 5, 2021 By pịa
Ogologo oge ole ka ọ na-ewe maka mmiri tank azụ iji kpoo ọkụ?
Kedu ihe m ga-eme ma ọ bụrụ na mmiri aquarium m dị oyi?
Ị nwere ike ịnweta mmiri microwave maka tank azụ?
Kedu ọnọdụ okpomọkụ kwesịrị ịbụ tank azụ mmiri oyi?
Kedu okpomọkụ tank m kwesịrị ịdị?
Kedu ka m ga-esi mee ka tank m na-ekpo ọkụ na-enweghị ikpo ọkụ?
Mmiri tankị azụ m kwesịrị ikpo ọkụ?
Enwere m ike iji temometa anụ maka mmiri?
Nwere ike nnu mmiri microwave?
Kedu azụ nwere ike ịdị ndụ na-enweghị igwe ọkụ?
Azụ nwere ike ịdị ndụ na-enweghị nzacha?
Kedu ka ị ga-esi eme ka tank azụ na-enweghị mgbapụta?
Ị chọrọ igwe kpo oku maka azụ mmiri oyi?
Azụ na-amasị oyi ma ọ bụ mmiri ọkụ?
Azụ mmiri oyi chọrọ ọkụ?
Kedu ka mmiri 85 dị?
Azụ mmiri oyi nwere ike ibi na tankị okpomọkụ?
Kedu ka m ga-esi lelee okpomọkụ mmiri aquarium m?
Kedu nke ka mma azụ mmiri oyi ma ọ bụ oyi?
Kedu ka m ga-esi dozie mmiri tank azụ m?
Ogologo oge ole ka ị nwere ike itinye azụ mmiri oyi n'ime tank ọhụrụ?
Mee ka mmiri nke tank gị kpoo ọkụ nke nta nke nta (ihe ngwọta nwa oge). A na-atụ aro ya naanị ka ọ bụrụ ihe ngwọta nwa oge mgbe ị na-agbalị ime ka tank azụ na-ekpo ọkụ na-enweghị ikpo ọkụ. Ị nwere ike jiri nwayọọ nwayọọ kpoo mmiri dị n'ime tank gị site n'ịgbakwunye karama mmiri ọkụ jupụtara na aquarium gị ma hapụ ya ka ọ na-ese n'elu ruo mgbe ọ rụchara ọrụ ya.
ọ nwere ike were n'etiti awa 24 na 48 wee rute na okpomọkụ. Mgbe m tụbara ọkụ m na tank m (ihe dị ka 2ft, 20 galọn), ọ na-ewe ihe dị ka awa 30-36 iji rute ezigbo okpomọkụ.
Were akpa ice ma ọ bụ mmiri oyi n'ime tank azụ iji wetuo okpomọkụ nke mmiri nwayọ. (Lezie anya ka ị ghara ibelata okpomọkụ karịa 2 ma ọ bụ 3 degrees F n'ime oge awa 4.) Zere itinye ice cubes ozugbo n'ime aquarium gị ọ gwụla ma ị na-eme ya na mmiri osmosis ma ọ bụ dechlorinated.
Onye otu adịchaghị. M na-eji ngwa ndakwa nri na-ekpo ọkụ na mmiri m na-agbanwe mmiri, mara mma nke ukwuu n'oge oyi ọ bụla. Ọ dị mma nke ukwuu.
N'ikwu okwu n'ozuzu, a bịa n'ihe gbasara oke okpomọkụ, azụ ga-adaba n'otu n'ime ụzọ atọ: Azụ mmiri oyi: N'okpuru 68°F (20°C) Azụ okpomọkụ: 75-80°F (24-27°C) Azụ na-ekpo ọkụ. : Okpomọkụ dị n'ụdị sara mbara, na-enwekarị ụdị nke dị n'elu.
Ebe dị mma bụ 76° ruo 80°F (25° ruo 27°C). Ụdị ole na ole dị mkpa ka edobe ya n'ogo dị iche iche na-ekpo ọkụ, ụfọdụ ụdị na-achọkwa okpomọkụ dị nju oyi ole na ole. Igwe ọkụ ọkụ dị mkpa. Ụdị mkpisi aka na-enyere gị aka ịlele okpomọkụ mgbe ọ bụla i lere anya na aquarium.
Kedu ihe kacha mma ị ga-eme iji mee ka tankị azụ na-ekpo ọkụ na-enweghị igwe ọkụ? Jiri obere tank. Nweta azụ mmiri oyi. Tinye ọkụ ọkụ n'ụlọ gị. Bugharịa akwarium n'ebe dị ọkụ nke ụlọ gị/na nso igwe ọkụ. Jiri mmiri ọkụ mee mgbanwe mmiri. Wepu mgbidi iko nke tank gị.
N'ozuzu, ọ kwesịrị ịdị ọkụ, ee.
Iji ihe ọkụ ọkụ anụ maka mmiri Ị nwere ike iji ya hụ na ihe fọdụrụ na-ekpo ọkụ nke ọma ma ọ bụ ọbụna ịlele okpomọkụ mmiri. Kedu ihe bụ ihe a? Iji jiri temometa anụ iji lelee okpomọkụ mmiri, naanị tinye nyocha nke temometa n'ime ite mmiri wee chere sekọnd ole na ole maka ịgụ okpomọkụ ikpeazụ.
Igwe ọkụ ọkụ na-ekpo ọkụ ga-emebi ngwa ndakwa nri ebe ọ bụ na nnu enweghị ike ịmịnye nnukwu okpomọkụ. Ngwongwo nnu siri ike na-agbaji n'ihi na mmiri niile ga-efunahụ ya.
Azụ 10 kacha mma nke mmiri oyi na-achọghị ọkụ anyanwụ dara Variatus Platy. Celestial Pearl Danio. Egwurugwu Shiner. Hillstream Loach. Endler's Livebearer. Clown Killifish. Cherry Shrimp. Dojo Loach.
Ịkwesịrị ịhazi mgbanwe mgbanwe mmiri otu ugboro kwa ụbọchị 3 ruo 5 iji hụ na azụ gị na-ebi ndụ ahụike na obi ụtọ n'ime tank gị na-enweghị isi. Azụ nwere ike ịdị ndụ na-enweghị ihe nzacha, mana ha enweghị ike ịlanarị n'ime mmiri ikuku oxygen na-adịghị na ya.
Otu n'ime ụzọ kachasị mfe iji mee ka mmiri dị na aquarium gị na-enweghị mgbapụta bụ iji ọkpọ ma ọ bụ iko. Naanị jupụta olulu ma ọ bụ iko na mmiri aquarium, bulie ya elu nke ọma ma dị elu, wụsa mmiri ahụ azụ n'ime mmiri ahụ.
N'adịghị ka aquarium nke okpomọkụ, ọ dịghị mkpa ka ị nye onye na-ekpo ọkụ maka tank mmiri oyi gị, Otú ọ dị, ọ bụ ezi echiche iji thermometer, n'ihi ya, ị nwere ike hụ na ọ na-edobe ya na mma dị mma, okpomọkụ na-adịgide adịgide maka azụ gị. Ị ga-azụta ihe nzacha maka tank gị, yana mkpuchi, ọkụ, na ngwa nyocha pH.
Ebe ụfọdụ azụ̀ na-ahọrọ okpomọkụ dị ọkụ, mmiri na-ekpo ọkụ nke ukwuu nwere ike igbu azụ̀ ọ bụla. Okpomọkụ dị elu na-eme ka ọchịchọ ikuku oxygen na-ebelata ma belata ọkọnọ ya. Ka okpomọkụ na-ebili, nsị nke mmiri nwekwara ike ịba ụba, ka ihe ndị na-egbu egbu na-aghọwanye ihe soluble.
Coldwater na-ejide oxygen karịa mmiri ọkụ, na azụ mmiri oyi dị ka azụ azụ ọla edo nwere nnukwu ikuku oxygen. Ịchọghị otu ma ọlị, mana ọkụ aquarium ga-amụnye aquarium ma gosipụta agba nke azụ. Ma ọ bụrụ na ịchọrọ osisi ndụ, ị ga-achọkwa otu mgbe ahụ.
85F(29.4C) Mmiri na-adị mma nke ukwuu kama ikpo ọkụ.
Mmetụta ọzọ nke idobe azụ mmiri oyi na okpomọkụ bụ ogologo ndụ dị mkpụmkpụ nke ga-ebilite n'ihi na a na-edobe azụ ahụ mgbe niile n'ọ̀tụ̀tụ̀ metabolic dị elu na-ekwekọghị n'okike. Site n'ime ka azụ mmiri oyi gị dị jụụ, ha ga-anọ ogologo ndụ karịa ahụike.
Igwe ọkụ ọkụ nke na-ejikọta n'akụkụ tank bụ ụzọ dị mfe iji mara ọnọdụ okpomọkụ, na ị kwesịrị ịlele okpomọkụ mgbe ọ bụla ị na-ele tank ahụ anya iji jide n'aka na ọ dịghị mgbanwe ọ bụla. Igwe ọkụ ọkụ na-emikpu n'ime mmiri dịkwa mana ọ nwere ike ịdị ọnụ karịa.
Azụ ebe okpomọkụ bụ nhọrọ kacha mma maka ndị mbido Ee, azụ ebe okpomọkụ ga-achọ ka edobe mmiri ha n'ebe dị n'etiti 20-25 Celsius C dabere na ụdị ahụ, mana azụ nke okpomọkụ na-adịkarị mma maka onye mbido. Gịnị kpatara nke a? Maachị 9, 2021.
Jupụta tank gị ihe dị ka otu ụzọ n'ụzọ atọ na mmiri okpomọkụ nke ụlọ site na bọket dị ọcha. Ịwụsa mmiri ahụ n'efere ma ọ bụ saucer nọ ọdụ na gravel ga-enyere aka idobe gravel ahụ. Tinye ihe mkpuchi mmiri, dị ka Tetra® AquaSafe® Solution, iji mebie mmiri ahụ. Chlorine dị mma maka gị, ọ bụghị azụ gị!
Chere ruo mgbe ma ọkwa amonia na nitrite bilitere wee daa na efu tupu ịgbakwunye azụ ndị ọzọ. Ọ na-ewekarị ihe dị ka izu 3-6 maka aquarium ọhụrụ ga-agafe okirikiri nitrogen mbụ, yabụ a ga-agbakwunye azụ naanị ole na ole kwa izu n'oge a.
Ego ole Amoxicillin Azụ tank Aquarium mmiri
Azịza ngwa ngwa: Enwere m ike ịtinye mmiri ọkụ na ọdọ mmiri
Ajụjụ: Enwere m ike iji mmiri tank mmiri ochie maka akwarium ọhụrụ
Enwere m ike itinye mmiri ọkụ na ọdọ mmiri Betta
Enwere m ike itinye mmiri ọkụ ọkụ n'ime tank nke azụ m
Enwere m ike iji mmiri mgbata ọkụ maka tankị azụ m
Azịza ọsọ ọsọ: Azụ mmiri na-ekpo ọkụ bụ Catfish
Azịza ọsọ ọsọ: Azụ mmiri na-ekpo ọkụ bụ Glofish
Bụ Azụ Mmiri Na-ekpo ọkụ Goldfish
Ajụjụ: Ọ bụ Sturgeon Warm Water Azụ
Ego ole Aquarium Gravel na tank azụ
Azịza ngwa ngwa: nwere ike ime ka mmiri mmiri na-eme ka mmiri na-agba mmiri
Previous Post: Ajụjụ: Kedu ka mmiri kwesịrị isi dị maka azụ Betta
Next Post: Azịza ngwa ngwa: Mmiri distilled dị mma maka azụ Betta